Ekupheleni kwekhulu leminyaka elidlule, US, futhi ngemva, kanye cinema ezweni babhekana negagasi intsha amafilimu. Esokuqala futhi aphumelela kakhulu indaba abafundi abaningana ababehlangene baphupha ocansini okokuqala. Ngaphandle kokukhetha, zonke abadlali umbani iwine ukuqashelwa sesibukeli. umbala Special uhlamvu ezahlukene, anibizela ngegama lakhe siqu - ". umama Stifler sika" Umlingisikazi Ihlanganisa isithombe uyoba uhlamvu kwalesi sihloko.
Akumangalisi ukuthi isithombe zaphumela ayakhanya esimnandi. Njengoba emkhomba abalandeli, okufanela akuyona screenwriter, futhi Dzhennifer Kulidzh. Lokhu ebukekayo owesifazane oseminyakeni abaneminyaka ne amahlaya akhe evamile okubhekwa 'sobudala "of Hollywood. Wazalelwa 1961, wayazi kusukela eminyakeni esikoleni, ukuthi ivelele phakathi ofunda ngenxa engasenathonya sakhe. Ukunquma ukuthi kufanele usebenzise, Jennifer aye esikoleni oyibamba eBoston.
Lutho emhlabeni akukho licace
Manje sibizwa ngokuthi umama Stifler. Lo mlingisi angazanga uma ulinde ngumpetha, futhi abantu bayoba nini indima isihloko. Waqala i-career ne kancane izithombe maphakathi nawo-90s. Othile ingxenye kwakungekaNkulunkulu ochungechungeni TV. Iqhaza lokuqala eziphawulekayo, Jennifer azenzile e "isikole" ahlekisayo "Flapper futhi stinky." I "Austin Amandla" Yabuye anikele khona endaweni yesehlakalo kanye uchungechunge ezinye izithombe. Ekugcineni, kuyanda ezingalindelekile livela Youth Band ngo-1999, lapho licabangela omunye the best in Filmography yakhe.
I umhlobiso oyinhloko ifilimu "American Pie" - umama Stifler sika. Umlingisikazi kuleli kheli le-indima, awuzange ekhethwe ithuba. Dzhennifer Kulidzh isungule kakade ngokwaso njengoba unqambothi nosomahlaya ume-up. With ukuthuthukiswa isiqondiso amahlaya kakhulu abasafufusa Hollywood hits hhayi ngaphandle iqhaza layo. Ngo-2001, wadlala intombi-manicurist riz Uizerspun e "Ngokomthetho Okwamafoi okuhanjwa nawo." Kulandelwa indlela acacile kuyoba nosingamama ububi incazelo eyeve eshumini nambili "A Cinderella Story" nge Hilary Duff e indima isihloko. Kuhle ewuchungechunge yethelevishini - "Joey," "Ubulili kanye City" futhi "Abangane" - okuthiwa Coolidge iziqephu.
Ngo izingxoxo zakhe eziningi, actress ababedlala umama Stifler, waqaphela ukuthi lesi sithombe - lowo kuyo uvame okuhlobene. Njengoba uma ukufakazela okuphambene, ukulandelela irekhodi Jennifer agcwaliswa olandelayo project uphumelele. Nakuba inkulumo yokulingisa "Epic Movie" futhi "Usuku Movie," abantu abaningi ungathathi sina, kudlalwa izinhlamvu kuzo kwasala inkumbulo ababukeli njengoba amahlaya nge Adamom Sendlerom, "Chofoza."
Stifler sika umama - Umlingisikazi Dzhennifer Kulidzh - kulo umsebenzi wakhe uhlala izindima kweqiniso amahlaya. Kuvele Filmography umxhwele, yena njalo dilutes sitcoms futhi sici amafilimu. Ukuze abayithandayo of ithalente lakhe, wayengumhlali blonde amafomu umxhwele. Iningi izindima zakhe - abesifazane abaneminyaka ome njengeqanda, ezifana kwathiwa eyokuqala umama Stifler.
Umlingisikazi nosomahlaya useyinto ethandwa kuze kube yilolu suku. Ukuyisa kude izici zobuso samanje, wazama ku ifilimu "Ukuphila Ubufakazi" nesithi "Kubi uLieutenant". Esikhathini uchungechunge idrama "ngasese kubazali", wafika ezishaya unkulunkulukazi u-eyisifebe.
Njengoba emkhomba Michael Patrick King, enquma ubunjalo Polka kwendle Sofi Kuchinski, ababhali bazo kubonakala kulesi indima Coolidge kuphela. Ngenhlanhla, actress uncome umdlalo wakhe show "Amantombazane amabili emadwaleni", ukudutshulwa okuyinto zivela 2011.
Ngaphandle ukwehlisa ijubane
Ngo-2012 wanyathelisa enye ingxenye "pie" ngokuthi "Konke eqoqweni." Ukususa uhlobo kumdlalo, ndawonye labadlala indzima lebalulekile nezinhlamvu esandulele izingxenye, abadali ayikwazanga bayakhohlwa Dzhennifer Kulidzh. uhlamvu wakhe, + njengoba bekulokhu kunjalo inimitable.
Namuhla, actress odlala unina Stifler, namanje esiqongweni ukuthandwa. Tight sokudubula isheduli kushiya ingcosana kuphela isikhathi siqu. Jennifer ngesikhathi esifanayo wahlanganyela kule "Guide dippers" futhi "Ngaphakathi Emi Shumer." Ngo-2014 wakhipha umqulu ahlekisayo, "Aleksandru abesabekayo, usuku enyantisayo ...", lapho uvela njengomuntu esiqinile instructress ukushayela. Ngaphezu sessions main, Coolidge ngokuvamile wezwakalisa izithombe zezingane.
Le filimu kunazo owaziwa usebenza Dzhennifer Kulidzh zihlanganisa lemisebenzi elandelayo:
"Abesifazane vs. Abantu" (2002).
"Izingxenye umzimba" (2003).
"Ukuze Ukucabangela Kwakho," "I-American Dream" (2006).
"Umbusi amaqembu", "Broncos Gentlemen", "Abanqotshiwe" (2009).
"Ubuhle le isikhwama esincane" (2010).
Kuyini isiteshi docking okwesikhathi laptop